Dhiigaaga Ma Ku Badbaadin Kartaa Nolosha Malaayiin Qof ? | Himilo Media Group
In aan soo qaato qisadan yar ee kooban waxa igu kalifay kadib markii aan arkay dhibaatooyinka ay dadku kala kulmaan dhiig raadista xilliga uu qof bukaan ahi u baahdo dhiig, waxa uu baadi goobka qofkii dhiigi shubi lahaa qaata waqti,waxaanay arrintaasi halis ku tahay xaaladda caafimaad ee qofka bukaanka ah.
Waxa hubaal ah in dad badan ay isweydiinayaan Jawaabta Su’aasha ah,Dhiigaaga Ma ku Badbaadin Kartaa Nolosha 2.4 Milyan oo Qof?, Balse nin u dhashay Dalka Australia ayaa arrintaasi ku guuleystay waxa aanu dhiigiisu ugu deeqay 2.4 Milyan oo qof.
Ninkan ayaa waxa magaciisa la yidhaahdaa James Harrison James waxaanu muddo 60 sano ah dhiigiisa ugu deeqayay dadka bukaanka ah.
James ayaa waxay da’diisu tahay 81 jir waxaanu muddaasi dheer uu Toddobaad kasta dhiigiisa ugu deeqi jiray dadka bukaanka ah waxaanu ku guuleystay inuu badbaadiyo Nolosha 2.4 Milyan oo qof.
Dhakhaatiirta Dalka Australia ayaa waxay sheegeen in dhiiga James uu yahay mid aan hore loo arag isla markaana sababtuna waxay tahay ayey dhakhaatiirtu yidhaahdeen in marka uu qofku uu dhiiga u shub qof kale aanu shuubi karin muddo afar bilood ka yar taasi oo ay cadaynteeda u adeegsadeen arrimo la xidhiidha dhinaca caafimadkaa, balse James waxa uu awood u lahaa inuu muddadaasi 60 sano ah uu toddobaad kasta qof bukaan ah ugu deeqo dhiigisa.
Dhakhaatiirta Dalka Ausralia ayaa waxay sheegeen in baadhitaano hor leh kadib ay xaqiijiyeen in 50 qof oo ay James isku dhiig yihiin ay ku nool yihiin Dalkaasi Australia.
James ayaa waxa jidhkiisa ku jira unugyo ka caawinaya inuu awoodo inuu dhiigiisa shubi kara xilli kasta oo uu u baahdo.
James ayaa sheegay in dadku ay aad ula yaabaan waxaanu yidhi, “Arrintani waa haybad aniga ii gaar ah, waxaanan filayaa waa hibada keliya ee aan leeyahay”.
Haddaba, haddii hal nin oo qudha uu dhiigiisa uu ku badbaadiyay nolosha 2.4 Milyan oo qof, maxaynu inagu bulsho ahaan ugu deeqnay dadkeena bukaanka ah ee u baahan in dhiig lagi caawiyo, wali ma iswaydiinay sidee ayaynu u yareyn karnaa baahida dhiiga dadka bukaanka ah ee taala dhakhtaradeena.
James ayaa haatan waxa uu joojiyay dhiigii uu ku caawin jiray dadka maadaama oo uu weynaaday.
Bulshada Reer Somaliland waxa la gudboon inay ku dedaalaan sidii ay ugu deeqii lahaayeen dhiigooda inta ay awoodaan si loo yarayn karo dhiibaatooyinka ka dhasha baadi goobka dhiiga xilliga uu qofka bukaanka ah ee baahan uu saaran yahay sarriirta.